तपाईंको घर बनाउनको लागि5सजिलो अपग्रेडहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक7सक्छ, 20215सक्छ, 2021 एलेक्स बेल्से ब्लग, सम्पादकको पिक, जीवन शैली
सबै विश्व मा, लक लक को कारण मानिसहरु घर मा अधिक समय बिताएको छ।
यसले मानिसहरूलाई भित्री वा आन्तरिक वातावरणबाट थाकेको हुन सक्छ।
धन्यबाद, त्यहाँ धेरै साधारण चीजहरू छन् जुन तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको घरलाई पुन: ताजा गर्न र फेरि यसमा रमाईलो गर्न।
हामी मध्ये धेरैले हालसालै घरमा धेरै समय बिताइरहेका छौं। चाहे तपाई घरबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ, परिवारको हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ, वा लामो दिन पछि फर्कदै हुनुहुन्छ, घर भने रहन्छ जहाँ हामी हाम्रो समयको विशाल अनुपात खर्च गर्दछौं।
त्यसकारण यस ठाउँलाई सुरक्षित, सुरक्षित र आमन्त्रित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो घर परिवर्तन गर्न वा आफ्नो ठाउँ ताजा गर्न चाहन्छन्, तर सजिलै दिक्क लाग्छ। त्यहा हाम्रो पाँच सजीलो अपग्रेड आउँछ!
यी साधारण परिवर्तनहरू कुनै पनि बजेटमा र कुनै पनि समय फ्रेममा प्रयास गर्न सकिन्छ। तपाईंसँग यसको सम्पूर्ण प्रोजेक्ट बनाउने समय छ, एक दिउँसो, वा केही घण्टा वा मिनेट पनि, यी मद्दतको लागि सुझावहरू छन्।
तपाईंको घरमा यी पाँच सजिलो अपग्रेडहरू ब्राउज गर्नुहोस्, र छनौट गर्नुहोस् कि तपाईं कसरी आफ्नो स्थान सुधार गर्नुहुनेछ!
सुझाव १: डिक्लटर
तपाईको घरलाई डिक्लट्रिtering गर्ने ठाउँ खाली पार्ने उत्तम र प्रभावकारी तरिकाहरू मध्ये एक हुन सक्छ। धेरै व्यक्तिले अवलोकन गर्छन् जुन पुरानो वा प्रयोग नगरिएका वस्तुहरू हटाउँदा मात्र घरले नयाँ महसुस गर्दछ। यसले एक सकारात्मक मानसिक प्रभाव साथै शारीरिक रूपमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
Decluttering सजिलै भारी महसुस गर्न सक्दछ, तर यो हुनु हुँदैन। केवल सानो सुरु गर्नुहोस्। यो घर कोठामा समस्या क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोगी हुन सक्छ जुन तपाईं प्राय: प्रयोग गर्नुहुन्छ।
सायद भान्छाघर, बैठक कोठा, वा घर अफिस सजिलै अव्यवस्थित हुन्छ - वा केवल एक दराज, वा शेल्फ। तपाइँसँग उपलब्ध समय वा उर्जामा डिक्लटरिंग प्रक्रिया अनुकूल गर्नुहोस्।
तपाईं (वा रिसाइक्लि)) आइटमहरू जुन तपाईं अब उप्रान्त प्रयोग गर्नुहुन्न, र पछि साईफाई गरेर र ती चीजहरू सही तरिकाले भण्डार गरेर तपाईं सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। बास्केट थप्ने जत्तिकै सजिलो परिवर्तन हुन्छ जहाँ कपडा प्राय: जम्मा हुन्छ, तपाईंको कुञ्जीहरू ह्या hang्ग गर्ने हुक, वा स papers्ग्रहित कागजातहरू भण्डारण गर्न फाइलले ठूलो भिन्नता बनाउन सक्दछ।
सुझाव २: स्विच उत्पादनहरू
बजेटमैत्री परिवर्तनको लागि जुन अझै तपाईंको घरलाई स्फूर्ति दिन सक्छ, किन तपाईं सफा, लुगा धुने, वा तपाईंको कोठामा सुगन्ध प्रयोग गर्नुहुने उत्पादनहरू परिवर्तन गर्नुहुन्न? यसले घरको वातावरण सुधार गर्न सक्दछ र तपाईंको सजावट वा व्यक्तित्वका साथ पनि सूट गर्न सक्दछ यदि आईटमहरू प्रदर्शनमा छन् भने।
यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने वातावरणीय अनुकूल सफाई उत्पादनहरुमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ घर वरिपरिको वातावरण मद्दत गर्नुहोस्। तपाइँ मौसमको लागि सुहाउँदो सुगन्ध छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै वसन्तको लागि ताजा र फूल वा हिउँदको लागि आरामदायक र मसलादार।
नयाँ उत्पादनहरूको बाहिरी रूप र गन्धले घरलाई बिभिन्न ठाउँको रूपमा महसुस गराउनको लागि पर्याप्त हुन सक्छ - र तपाई यसलाई स्वच्छ र सफा राख्न पनि प्रेरित भएको महसुस गर्नुहुन्छ!
सुझाव 3: व्यक्तित्व थप्नुहोस्
घर अपग्रेड गर्ने र यसलाई निम्त्याउने महसुस गर्ने बृद्धि गर्नका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी तरीका भनेको सम्पूर्ण ठाउँमा हाम्रो व्यक्तित्व झल्काउनु हो। तपाईं यसलाई चीजहरू र सजावट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई मनपर्दछ, वा त्यो मौसमी र ​​आकर्षक महसुस गर्नुहुन्छ।
यो परिवार र साथीहरूको फोटो हुन सक्छ, बच्चाहरूको चित्रकला वा कला परियोजनाहरू, आईटमहरू जुन तपाईंको शौकहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ, र अधिक। तपाईंले कुनै पनि अतिरिक्त पैसा खर्च गर्नुपर्दैन! केवल तपाईंसँग पहिले नै भएको सुविधाको अझ बढी बनाउनुहोस् - जस्तै मनपर्ने पुस्तकहरू, एक वाद्य यन्त्र, वा अधिक।
व्यक्तित्वको स्पर्शले तपाईंको घरलाई यस्तो महसुस गराउँदछ कि यो तपाईंको मूल्यमान्यता र प्राथमिकताहरूको सही प्रतिबिम्ब हो, साथै समय बिताउनमा रमाइलो पनि हुनेछ!
सुझाव:: एक नवीकरण परियोजना छान्नुहोस्
नवीकरण परियोजनाहरू भव्य वा डरलाग्दो लाग्न सक्छ, तर ती हुनु हुँदैन। जबकि पहिले भन्दा बढी मान्छेहरू छन् आफ्नै घर बनाउन छनौट गर्दै, तपाईं केवल विशेष कोठाको संगठन वा भण्डारण स्तरवृद्धि गरेर सानो सुरु गर्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि।
तपाईको किचन पन्त्री अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, वा बाथरूम वा बेडरूममा केही गडबडी हटाउन क्याबिनेट थप्न। वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ केवल तपाइँको बगैचा, वा घर भित्र एक विशेष कोठा सफा गर्न सक्नुहुन्छ।
नवीकरण प्रमुख हुनु हुँदैन। तिनीहरू केवल तपाईंले धेरै समय खर्च गर्ने क्षेत्रमा सूक्ष्म सुधार हुनसक्छन्। सानो परियोजना छान्नुहोस् र यसलाई पूरा गरेर सन्तुष्टि लिनुहोस्!
सुझाव:: हरियो जानुहोस्!
तपाईं हरियोमा गएर तपाईंको घरको मूल्य, उपस्थिति र वातावरणीय मित्रता अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ! यसको अर्थ वातावरणलाई मद्दत गर्ने घर वरिपरि निर्णयहरू - जस्तै कुनै पनि ऊर्जा स्रोतहरू बन्द गरीरहेको छ जुन प्रयोगमा छैन, रिसाइक्लिing र कम्पोस्टिing गर्दै, बाँकी अपहरू प्रयोग गरेर, तपाईंको सफाई उत्पादनहरू वातावरणमैत्री छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै, र अधिक।
माथिका कुनै पनि सुझावहरू, जे भए पनि सानो छ, द्रुत रूपमा तपाईंको घर अपग्रेड गर्न र तपाईंको ठाउँ पुन: ताजा गर्न मद्दत गर्न सक्दछ ताकि यो बस्न पाउँदा आनन्द लाग्नेछ!
सफाई वातावरण घर घर सुधार
एलेक्स बेलायतमा आधारित B2B पत्रिका सम्पादक हो। उनी डिजिटल मार्केटिंग, व्यापार रणनीति, स्वास्थ्य, कल्याण, राजनीति, अर्थशास्त्र, र वर्तमान मामिला सम्बन्धी मुद्दाहरूको बारेमा लेख्छन्। एलेक्स मा काम गर्दछ नयाँ फ्रन्टियर्स मार्केटिंग.
भाँडा, खरीद, निर्माण - तपाईंको अर्को घरको लागि के गर्ने